मङ्गलबार यस्तो छ तरकारीको मुल्य | Business TV Nepal
डा. जागेश्वर गौतमको सरुवा सदर, अन्यको रोकियो... August 3, 2021
प्रधानमन्त्री देउवाद्धारा डा. जागेश्वर गौतमको सरुवा रोक्न निर्देशन... August 3, 2021
वाग्मती प्रदेशका ८ वटा जिल्ला अस्पतालमा वृहत अक्सिजन प्लान्ट जडानको तयारी... August 2, 2021
मङ्गलबार यस्तो छ तरकारीको मुल्य
भदौ २९,काठमाडौं । मङ्गलबार काठमाण्डौमा आलु रातो(भारतीय) को मुल्यमा २ रुपैयाँले गिरावट भएको छ । सोमबार प्रतिकेजी २९ रुपैयामा कारोवार भएको आलु रातो (भारतीय)को मुल्य मङ्गलबार प्रतिकेजी २७ रूपैयाँमा कारोवार भइरहेको छ ।
मङ्गलबार काउली (स्थानिय)को मुल्य स्थिर रहेको छ । सोमबार प्रतिकेजी ८० रुपैयामा कारोवार भएको काउली (स्थानिय)को मुल्य मङ्गलबार पनि प्रतिकेजी ८० रुपैंयामा कारोवार भइरहेको छ । मङ्गलबार प्याज सुकेको (भारतिय)को मुल्यमा २ रुपैयाँ २० पैसाले गिरावट भएको छ । सोमबार प्रतिकेजी ४५ रुपैयामा कारोवार भएको प्याज सुकेको (भारतिय) मङ्गलबार प्रतिकेजी ४२ रुपैया ८० पैसामा कारोवार भइरहेको छ।
सोमबारको तुलनामा मङ्गलबार गोलभेडा सानो(टनेल)को मुल्यमा १ रुपैयाँले गिरावट भएको छ। सोमबार प्रतिकेजी १२ रुपैया ८० पैसामा कारोवार भएको गोलभेडा सानो(टनेल) मङ्गलबार प्रतिकेजी ११ रूपैयाँ ८० पैसामा कारोवार भइरहेको छ । मङ्गलबार सानो गोलभेडा(लोकल्) को मुल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । सोमबार प्रतिकेजी ७ रुपैया ५० पैसामा कारोवार भएको सानो गोलभेडा(लोकल्) को मुल्य मङ्गलबार प्रतिकेजी ८ रुपैयामा कारोवार भइरहेको छ।
आइतवार सुनको मुल्य स्थिर ,चाँदिको मुल्यमा गिरावट - September 26, 2021
साताको पहिलो दिन यस्तो छ तरकारीको मुल्य - September 26, 2021
डा. पोखरेललाई ‘कलम के सिपाही‘अवार्ड - September 24, 2021
स्टिल उद्दोगिहरु आन्दोलित
मङगलवार सुनचाँदीको मुल्य स्थिर
आइतवार सुनको मुल्य स्थिर ,चाँदिको मुल्यमा गिरावट
साताको पहिलो दिन यस्तो छ तरकारीको मुल्य
डा. पोखरेललाई ‘कलम के सिपाही‘अवार्ड
आईएमई मोटर्सको “दशैँ तिहारको बहार पक्काउपहार” साथै बम्पर उपहार योजना सावर्जनिक
बेलायतको उत्कृष्ट ‘न्यूस्टेड वुड स्कूल’को अभिभावक संघको अध्यक्षमा राजन कँडेल नियुक्त